किसमिस खाने सहि समय कुन हो ? यस्ता छन् यस्का फाइदाहरु | Seto Khabar
किसमिस खाने सहि समय कुन हो ? यस्ता छन् यस्का फाइदाहरु
काठमाडौँ । यद्यपि किसमिश जुनसुकै बेला पनि खान सकिन्छ, तर यदि तपाई छिटै तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले एउटा समय निर्धारण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाई यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि मोटोपनबाट हैरान हुनुहुन्छ भने खानामा किसमिसको सेवन अवश्य गर्नुहोस्, यसले तपाईलाई पक्कै फाइदा गर्छ । किशमिशमा धेरै पोषक तत्वहरू पाइन्छ तर यसलाई खाने सही तरिका र समय पनि छ। आउनुहोस् जानौं दैनिक कसरी र कति किसमिस खानुपर्छ, जसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ ।
भिजाएर किसमिस खानुका फाइदाहरु
किशमिश एक यस्तो ड्राई फ्रुट हो, जसलाई खीर बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा आइरन, पोटासियम र क्याल्सियम जस्ता पोषक तत्व पाइन्छ जसले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ। किसमिसलाई सुकाएर वा भिजाएर खान सकिन्छ। यसलाई खाली पेट खाँदा धेरै फाइदा हुन्छ ।
कुन समयमा किसमिस खानुपर्छ
हरेक दिन बिहानको खाजामा किसमिस खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तपाईं ओट्स वा शेकमा किशमिश थपेर पनि तिनीहरूलाई उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले हरेक दिन खाली पेटमा एक मुट्ठी किशमिश खानुभयो भने, तपाईं पूर्ण रूपमा फिट हुनुहुनेछ।
किशमिश खानुका फाइदाहरु
कब्जियतको गुनासो भएका व्यक्तिले भिजाएर किसमिस खान सक्छन् । यसले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सक्छ।
तौल घटाउनमा पनि किशमिश निकै फाइदाजनक हुन्छ । यस बाहेक यसमा प्राकृतिक चिनी हुन्छ, जसलाई धेरै चिनी खानुको सट्टा किसमिस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउनुका साथै किसमिस हड्डीका लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ । अर्थात् किसमिशमा एक होइन यस्ता धेरै फाइदा छन्, जसको प्रयोग गरेर तपाई कुनै पनि समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ ।